राजपामा पूर्वका नेता हावी भए (अन्तर्वार्ता) | Ratopati
Home रातोपाटी 2018-07-22T16:31:31.553807+05:45
राजपामा पूर्वका नेता हावी भए (अन्तर्वार्ता)
वृजेश गुप्ता, महासचिव, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल गठन भएको झण्डै तीन महिना पुग्न लागेको छ, तर त्यसभित्र रहेका विवादहरु व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन ।
पार्टीको गठन प्रकृयादेखि लिएर विधान, घोषणापत्र तथा कार्यसमितिलगायत माथि विभिन्न आरोपहरु लाग्न थालेपछि पार्टी आन्तरिक रुपमा विवादीत बनेको छ । छ जनाको अध्यक्ष मण्डल रहने गरी ८१५ जनाको कार्यसमिति बनाइए पनि तर त्यसमा पनि धेरैले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
पार्टीको कार्यसमिति, विधान, घोषणापत्रलगायतको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै नारायणीदेखि पूर्वका मधेशी नेताहरुले हिजो रुपन्देहीका भैरहवामा छुट्टै भेला गरेका थिए । सो भेलाको आयोजना राजपा नेपालका सहअध्यक्ष हृदयश त्रिपाठीले गरेका थिए ।
भेलामा राजपा नेपालमा असन्तुष्टहरुको जमघट थियो । के भयो भेलामा ? के छ असन्तुष्टि ? यसकालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा राजपा नेपालका महासचिव वृजेश गुप्ता जो भेलामा सहभागि थिए । रातोपाटीले उनीसँग गरेको छोटो कुराकानीः
राजपा नेपालका असन्तुष्ट पक्षले भैरहवामा छुट्टै भेला गरेको कुरा आइरहेको छ । खास के हो कुरा ?
– असन्तुष्ट पक्ष त नभनौ तर हामी पश्चिमका नेताहरु आपसमा छलफलका गर्नका लागि बसेका थियौंँ । यसअघि पाँच नम्बर प्रदेशमा सम्पन्न भएको चुनाव र असोज २ गते हुन गइरहेको चुनावको बारेमा छलफल गर्नका लागि बसेका थियौं ।
के निष्कर्ष निस्कियो त छलफलमा ?
यही कि यदी दुई नम्बरको चुनाव सार्दा पाँच नम्बरको पनि चुनाव सार्नु पर्थ्यो तर त्यो भएन । दुई नम्बर प्रदेश र पाँच नम्बर प्रदेशका मधेशी जनता समान रुपले पीडित छन् । उनीहरुको माग पनि एउटै हो ।
दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सरकारले सारेको छ तर असन्तुष्टि राजपा नेपालमाथि किन त ?
सरकारले त भनिरहेको छ कि राजपा नेपालको सहमतिमा दुई नम्बर प्रदेशको मिति सारेका हौँ । सरकारका प्रतिनिधिले यो कुरा एकपटक होइन, पटक पटक भनिरहेका छन् तर राजपा नेपालबाट त्यो रुपमा त्यसको कुनै खण्डन आएन । अनि यसबाट के बुझ्ने हामी ? सरकारले दुई नम्बरको चुनाव रोकेर पाँच नम्बरको घोषणा गर्यो भने त्यसलाई राजपा नेपालले रोक्नु पथ्र्यो । सरकारलाई रोन्नका लागि दवाव दिएको भए अवश्य नै रोकिन्थ्यो तर त्यसो नगरेर मौन बस्यो । घोषणा भइसकेपछि पनि त्यसलाई वहिष्कार गर्नुपथ्र्यो त्यसलाई रोक्न सारा शक्ति लगाउनु पथ्र्यो तर केही कतै देखिएन । चुनावका दिन सबै शीर्ष नेताहरु काठमाडौमा बसे । एक दिनको बन्द कार्यक्रम र त्यस अगाडिका लाठी जुलुस, मसाल जुलुस जस्ता आन्दोलनको कार्यक्रम राखेको थियो त्यसले यो सरकारलाई के दवाव पर्छ ? यसको मतलब राजपा नेपालको समर्थनमा चुनाव सारिएको हो भनि पुष्टि हुन्छ । त्यसो भए सरकार ले भनेको कुरामा दम छ !
तपाई त पार्टीका महासचिव हुनुहुन्छ, राजपा नेपालको बारेमा यसो भन्न मिल्छ त ?
–म पार्टीको महासचिव हुँ तर त्यसको विधान कस्तो छ थाह छैन । पार्टीको विधान पनि बनेको छ भने कुरा राजपा नेपालका केही नेता बाहेक कसैलाई थाह छैन । जुन पार्टीमा छु, त्यो पार्टीको विधान कस्तो छ, के लेखेका छन् त्यसको बारेमा जान्ने अधिकार पार्टीमा रहेका अन्य नेताहरुलाई छ कि छैन ? हामी त्यो पार्टीमा लागेका छौ, हामीले त्यो विधानको बारेमा थाह पाउनु पर्छ कि पर्दैन ? कि छजनाले जे दिएका छन् त्यसैलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ? म पार्टीको महासचिव हुँ तर पार्टीको विधान बारे अनलाइन, टीभी र पत्रपत्रिकाको माध्यमाबाट जानकारी लिन्छौँ यो कस्तो दुर्भाग्य हो । विधान डेमोक्रेटिक हुनुपर्छ हिप्पोक्रेटिक होइन । समावेशी र समानुपातिक तथा सबैको मर्यादाक्रमलाई ख्याल गरेर विधान बनाउनुपर्छ । त्यसमा केही विचार गरेको छैन ।
अध्यक्ष, सहअध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिवहरु त छन् यसमा फेरि कस्तो मर्यादाक्रम भन्नुभएको ?
–राजपा नेपालको १२ वटा जिल्लामा संगठन रहेको छ । तर त्यसको कार्यसमिति ८१५ जनाको छ । नेपाली काँग्रेस देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी हो त्यसको कति छ, एमाले दोस्रो ठूलो पार्टीका त्यसको कति छ हेर्नुस् त्यसबाट थाहा हुन्छ । अब राजपा नेपाल पार्टी भएको छ, अब मोर्चा होइन । पार्टीहरुको आफ्नौ ह्यारार्की हुन्छ । अब हरेक कुरामा भागबण्डा लगाउन मिल्दैन । मोर्चाले प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न जाँदा सबै दलबाट एकएकजना प्रतिनिधिहरु जान्थ्यो त्यो स्वभाविक हो तर अहिले पनि वार्ता वा कुनै ठाउँमा जाँदा सबै दलको प्रतिनिधि जस्तै किन जानु पर्यो । ८१५ जना कार्यसमितिमा झण्डै एकसयजना महासचिवको आवश्यकता किन पर्यो । त्यो किन ? छजना अध्यक्षलाई हामीले नेता मानेका छौ के अब उसको बीबी (श्रीमती), छोरा, छोरी, भतिजा, भतिजीलाई पनि नेता मानिदिनुपर्ने । पार्टी गठन त हरेक क्षेत्रका मान्छे राखेर मार्यादाक्रम मिलाएर बनाउनुपर्ने होइन, एउटै गाउँको मान्छे राखेर पार्टी बन्छ, श्रीमती छोरा छोरी, भतिजा भतिजी नाता कुटुम्बलाई राखेर पार्टी बन्छ, बन्दैन नि । हो हामीलाई यिनै कुराहरुमा आपत्ति छ । यी कुराहरुलाई सुधार गर्न भनेको छु । १५ दिनभित्र त्यसलाई सुधार गर्न भनेका छौँ ।
लिखित अल्टिमेटम दिनुभएको छ कि मौखिक हो ?
–लिखित होइन, काठमाडौ पुगेर नै शीर्ष नेताहरुसँग कुरा गर्ने भनेका छौ ।
भनिन्छ, पार्टी नै विभाजन हुँदैछ रे ?
–होइन, यो एकदम गलत कुरा हो । हामीलाई पार्टी एकीकरण गरेका छौ जुट्नका लागि फुट्नका लागि होइन । हामीले पार्टीभित्र रहेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न भनेका छौ । राजपा नेपालमा ५० प्रतिशत शेयर तमलोपाको रहेको छ । ११ वर्षदेखि त्यो पार्टीमा लागेको छु । यत्रो मेहनतले एकीकरण भएको छ त्यसलाई छाड्न सकिदैन बरु त्यही रहेर पार्टीलाई राम्रो बनाउँछु ।
राजपा नेपाल पूर्वको कब्जामा छ भने आरोप पश्चिमका नेताहरुको छ नि ?
–हो त । छ मैले अघि नै विभिन्न कुराहरु भने त्यसबाट पुष्टि हुन्छ । राजपा नेपालले पश्चिम मधेशमाथि ध्यान नदिएको कुरा सही हो । देशको पाँचौ पार्टीको रुपमा राजपा नेपाल रहेको छ । पाँचौ नम्बरको स्थान ८१५ जनाको केन्द्रीय समितिले हासिल गरेको होइन, सांसदको संख्याले हासिल गरेको हो । राजपा नेपालमा पश्चिमका सांसद पनि छन् । सातजना सांसद रहेका छन् त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सांसदको संख्या लिएर पार्टीका र्याङकिङमा राख्ने तर ती सांसदहरुलाई सम्मान नदिने यो कस्तो नीति हो ? पूर्वतिर बढी सांसद छन् तर त्यसको तुलनामा पश्चिमलाई कम मान्न सकिँदैन त्यही अनुसार पार्टीमा क्रम मिलाउनुपर्छ । घरमुलीले सबैलाई बराबर देखाउनुपर्छ । सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । पार्टी गठन भएको तीन महिना भइसक्यो तर व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन । त्यस पार्टीमा छौं तर कुनै महत्व छैन ।
यदि यी कुराहरु सुधार भएन भने के हुन्छ ?
–अहिले केही भन्न सकिदैन । तर यति भन्छु पार्टी विभाजन हुँदैन । केन्द्रीय समितिको बैठक बसाउन सकिदैन भने महाधिवेशन गराउनुपर्छ । पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने हामी महाधिवेशन गराउन माग गर्छौ । पार्टी जोड्नु मात्र विकल्प होइन, त्यसलाई व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ । पार्टी पार्टी बनोस् एनजियो होइन । पार्टी गठन गर्दा तराई मधेश शब्द हटाएको छ कि यसलाई राष्ट्रव्यापी बनाउने भनेर । तर, त्यो पार्टी परिवार, गाउँ, जिल्लाभन्दा माथी उठ्न सकेको छैन । राष्ट्रव्यापी बनाउनका लागि सोच पनि राष्ट्रव्यापी जस्तै राख्नुपर्छ ।
डा.गोविन्द केसी प्रकरणबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मुख खोल्यो
सक्कली श्रीमतीको नामको कागजात बनाएर नक्कली श्रीमती अमेरिका लैजान लागेको खुलासा
सिन्डिकेटबारे फेरि बोल्यो गृहमन्त्रालय : यातायात समितिको नवीकरण हुन्न
एकैपटक ७२ जिल्ला न्यायधीशहरुको सरुवा, को कहाँ ? (सूचीसहित)
डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याइयो, जुम्ला झडपबारे बोल्यो गृह मन्त्रालय
डा. केसीका यी सात घटना : जसले बिहीबार दिनभर चर्चा पायो